Bogga ugu weyn Maxay Tahay Miisaaniyaddayda Dheeman Habka ugu Fiican ee Loo Iibiyo Giraan Dheeman 2022
Waxaan dhaxlay faraanti dheeman ah dhawaan. Farxaddii ku timid lahaanshaha faraantigaas qiimaha badan qiima ma lahayn.
Miyaad xitaa qiyaasi kartaa in dunidan la casriyeeyay aanan garanayn faraantigaas oo kale inuu jiray?
Qadiimiga iigu yeer; Waxba igama gelin!
Kaliya waxaan ku faraxsanahay in sodohday ay ii aragtay inaan istaahilo inaan xidho khasnaddan sidii ay i doonaysay. Hadda waxaan haystaa wax u qalma inaan u gudbiyo jiilkayga. Yaa og, xitaa waan iibin karaa.
Haddii aad isku aragtid booskayga oo kale, tiradan ayaa kaa yaabin doonta!
Dhawaan, qiimaha dheemanka ayaa labanlaabmay qiimihii hore ee $ 7,000 halkii carat in 2015 ilaa $ 9,000 halkii carat sanadkan. Iibiyeyaashu waxay hadda ku jiraan faa iido ay ku kasbanayaan tan badan oo lacag caddaan ah oo lagu iibiyo dheemankooda.
Tiradan, iibinta giraanta dheemankaaga waxay u ahaan doontaa wanaagga weyn.
Nala joog intaan ku ogeysiinayo siyaabaha ugu wanaagsan ee loo iibiyo faraantiga dheemanka.
Markaad raacdo talooyinkan, waxaad gabi ahaanba baran doontaa sida loo iibiyo dheemankaaga qiimo tartan.
Waa maxay Farxaddayda Dheemanka?
Si kasta oo aad ku heshay giraanta dheemankaaga, ha ahaato hadiyad ahaan ama faraantiga hawlgelinta, su'aasha soo baxda mar walba waa "intee in le'eg yahay faraantigaygu".
Si aad u ogaato qiimaha giraanta dheemankaaga, waxaad haysataa laba arrimood oo aad iska hubiso. Dhagaxii ku qornaa iyo biraha guutada.
Ogaanshaha inta mid walba haddii tani qiimo leedahay waa heshiiska dhabta ah.
Tani waa waxa aan ula jeedo!
Tayada dheemanka ayaa ah qodobka koowaad si loo ogaado qiimaha dheeman kasta. Habka ugu fiican ee lagu ogaan karo qiimaha dheemankaaga ayaa ah in lala barbardhigo dahabka kale ee leh sifo isku mid ah.
Waxay ku siin doontaa qiime sax ah maxaa yeelay laba dheeman isku mid ma noqon karaan.
Sidoo kale, dahablaha ayaa mararka qaarkood go'aamiya qiimaha dheemanka. Waxay ku iibsan karaan dheemanta qiimaha saxda ah haddii ay cusub tahay, laakiin markay iibsanayaan dheeman la isticmaalay, qiimuhu mar walba wuu ka duwan yahay.
Waxay iibsanayaan waxyeellada laga yaabo inay ku jirto dheemanka, sida wasakhda ku taal dhagaxa, dhagaxa ka maqan goobta, iyo jab ku yaal kooxda. Iibsashada giraantu waxay ka dhigan tahay inay u baahan yihiin inay hagaajiyaan oo ay u rogaan macaash badan.
Si kastaba ha ahaatee, go'aaminta qiimaha giraanta dheemantaadu waxay ku xiran tahay sida aad u iibiso faraantiga.
Intee in le'eg ayaan ku iibin karaa faraantigayga dheemanka?
Caddadka aad heli doonto marka aad iibinayso dheemankaaga ama faraantiga hawlgelinta ayaa aad ugu xidhan meesha aad ka iibiso.
Waxaan sameeyay tijaabo halkaas oo aan ku siiyay dheeman isku mid ah lix iibsadaha dahabka kala duwan si aan u helo meesha ugu fiican ee lagu iibiyo faraantiga dheemanka:
Iyada oo la jabsado
Dahablaha maxaliga ah
Iibsade dheeman oo ku takhasusay
Qiimaha ay i siiyeen faraantiga dheemanka ayaa u dhexeeyay $ 4,200 in $ 6,300 halkii carat. Haddaba, qiimaha aad ka iibinayso giraantaadu waxay ku xidhan tahay meesha aad ka iibiso iyo tayada dheemanta.
Bog ku jira maqaalkan ayaa ku tusi doona sida ugu fiican iyo meelaha lagu iibiyo faraantiga dheemankaaga oo aad soo gasho lacag aad u badan.
Real arrimo go'aaminaya qiimaha dheemanka
Waxaa jira arrimo badan oo saamayn ku yeelan kara qiimaha dheeman kasta. Hadday tahay giraanta hawlgelinta ama hadiyad bay kuu ahayd oo aadan garanayn qiimaha, arrimahan ayaa kaa caawin doona inaad dejiso qiimihiisa dib -u -iibinta.
#1. Shahaadooyinka Dheemanka
Ogaanshaha shahaadaynta dheemankaaga ayaa kuu sahlaysa in aad giraantaada ka iibiso macaash wanaagsan.
Dadka badankiisu waxay yaqaanaan 4C -yada:
Midabka, dheemanka leh midab qoto dheer oo saafi ah ayaa qaali noqon doona.
Dheemanka leh dhalaal cad oo dhalaalaya ayaa kordha dhalaalka waxaana lagu iibin karaa qiimo ka sii weyn.
Sidoo kale, dheemanka waxaa lagu qiimeeyaa halkii carat, marka carat -ka sare, qiimaha sare ayay kuu soo geli kartaa.
Aqoonta 4C -yadaan, iibsadayaashu waxay ku xisaabin doonaan qiimaha giraanta dheemankaaga.
Si kastaba ha ahaatee, kuwani ma aha qodobka kaliya ee go'aamiya sumadda qiimaha dheemanka ee iibsade kasta.
#2. Dhagaxa Xarunta
Dhab ahaantii, 4C -yada ayaa ah qodobbada ugu muhiimsan waxayna sababi karaan isbeddel qiimaha ah 5% ilaa 30%, laakiin waxaa jira siyaalo kale oo la mid ah in la tixgeliyo.
Dhagaxa dhexe wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah markaad rabto inaad ogaato qiimaha dhabta ah ee faraantiga dheemankaaga.
Tusaale ahaan, haddii aad haysato hal dhagax oo weyn giraantaada, inta badan qiimaha ayaa ka iman kara.
Tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaad qaaddo waa inaad go'aansato dhagaxa aad ku haysato faraantigaaga. Hubi haddii ay tahay ruby, safayr, dheeman ama xitaa sumurud.
Macluumaad badan oo aad ka haysato dhagaxa weyn, ayaa aqoon fiican kuu leh inaad iibiso.
Fluorescence waa awoodda dheemanka si ay u bixiso iftiin midab jilicsan marka la hoos geliyo iftiinka ultraviolet, sida iftiinka madow.
Dhab ahaantii tani waa cillad xagga tayada dheemanka ah sababta oo ah marka dheemanku u muuqdo mid mugdi iyo calool -xumo leh halkii ay ka ahaan lahayd mid cad oo dhalaalaysa, waxay hoos u dhigaysaa qiimaha.
Taas macnaheedu waa dheeman soo saarta fluorescence xoog leh ayaa qiimaheedu u dhexeeyaa 10-20% marka loo eego kuwa leh fluorescence daciif ah ama midna.
Qaababka dheemanka ayaa sidoo kale saameeya qiimaha aad iibiso dheeman
Guud ahaan, dheeman cad oo wareegsan oo le'eg carat isku mid ah ayaa ka qaalisan qaababka kale. Dhagaxa ugu hooseeya xagga qaabka waa emerald, oval, pear, iyo marquis cut.
Sababta kala duwanaanshahan qiimaha ayaa ah xaqiiqda ah in dheeman cad oo dhalaalaya ay yihiin kuwa ugu badan ee la iibsado, iyagoo qiimaha sare maraya.
Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay habka qaabka wareega uu u kala diro dheemanka.
Waxyaabaha kale ayaa ah
Waa kuwan arrimo kale oo saamayn ku yeelan kara qiimaha dheemanka.
The polish iyo summeter dhagaxu wuxuu saamayn karaa qiimaha giraanta dheemanka 7-10%. Polish halkan waxaa loola jeedaa habsami u socodka dusha dheemanka ka dib goynta, halka isbarbar dhigga micnaheedu yahay saxnaanta guud ee goynta qaabka.
Adkeynta dheemanka sidoo kale waxay ka dhigan tahay dhammeynta dhagaxa, waxayna saameynayaan muuqaalka guud ee jawharadda ugu dambeysa.
Tirada yaraanta wuxuu kaloo saameeyaa qiimaha dheeman kasta. Halka dheemanka uu ka yimid, sida ay u adkayd in la helo, dhammaan arrimahan ayaa saameyn weyn ku leh qiimaha dhagaxa.
Gabagabadii, dheemanta way adkaan kartaa in la kala saaro sababo badan oo keena isbeddellada qiimaha. Xataa marka la sameeyo nidaam qiimeyn sax ah oo otomaatig ah, qiimeeyayaasha dheemanka waa in ay tixgeliyaan dhammaan waxyaabaha isku xiran si ay u qiimeeyaan qiimaha dheeman gaar ah.
Waa Maxay Habka Ugu Wanaagsan Ee Loo Iibiyo Faraantigeyga Dheemanka Maanta?
Aynu ku tusno meelaha ugu waxtarka badan ee lagu iibiyo faraantigaaga dheemanka oo aad gurigaaga aado adiga oo wejigaagu ka muuqdo dhoolla -caddeyn.
Pawnshops waxay ku siin doontaa xawaare iibinta alaabtaada, laakiin kuma siin doonto qiimaha ugu fiican.
Si aad u hesho heshiis wanaagsan, had iyo jeer way wanaagsan tahay inaad ka hubiso shahaadooyinka pawnshops Xafiiska Better Business Bureau ama dib u eegidooda internetka. Inkasta oo qaar ka mid ah dukaamaysiga ay ka fiican yihiin kan kale.
Sidoo kale, ka hor intaadan aadin pawnshop, ogow qiimaha tafaariiqda ee giraantaada. Sidan ayaad u yeelan kartaa dhibic tixraac aad ku gorgortanto.
Haddii aad diyaar u tahay inaad gorgortanto, waxaad xitaa ku dambayn kartaa qiimo hufan, laakiin dukaanka pawn -ku kuma siin doono heshiiska ugu fiican.
Si aad u iibiso giraanta dheemankaaga, waxaad si toos ah ugu tagi kartaa dilaal.
Dillaalku wuxuu kuu daryeelayaa habka iibka, laakiin waa inaad ku bixisaa qaab komishan.
Dillaaliinta badankoodu waxay maskaxda ku hayaan iibsadayaal ka hor inta aysan albaabka gelin. Waxay noqon kartaa iibsade dukaan kale ama macmiil gaar ah.
#4. Guriga Xaraashka
Haddii aadan rabin inaad booqato ganacsato kala duwan si aad u hesho heshiiska ugu fiican, waxaad isku dayi kartaa guri xaraash ah.
Inta badan guryaha xaraashka ee adduunka ayaa ku siin doona qiimeyn lacag la'aan ah shayga aad rabto inaad iibiso. Doorashada habkan waxay noqon kartaa mid halis ah, halkii, la tasho ilo badan.
Haddii ay suurtogal tahay, waxaad dooran kartaa guri xaraash oo kaa caawin kara inaad giraanta u geyso dahablaha madaxa bannaan iyo shaybaarka GIA.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in guri xaraash ah uu iibintaada ka qaadan doono guddi, laga yaabee ilaa 20%. Laakiin waxaad sidoo kale ka faa'iideysan doontaa adeegyada sida caymiska iyo sawir qaadista alaabta.
#3. Dukaanka dahabka ee guridda
Ikhtiyaar kale oo muuqda waa dahabka guridda.
Dukaanka gurracan wuxuu leeyahay khabiir baaraya giraantaada oo qiimeeya qiimaheeda. Guud ahaan, habsocodku waa sida dukaan dahabka oo madaxbannaan.
Waa muhiim inaad hesho fikrado kala duwan qiimaha giraantaada. Waad kordhin kartaa waqtiga aad leedahay si aad u booqato dukaanka guridda iyo dukaanka dahabka ee madaxbannaan si aad u hesho xulashooyin badan.
#2. Dukaanka Dahabka ee Madaxbannaan
Booqashada dahabka madaxbannaan waa hab kale oo si fudud loogu iibin karo giraanta dheemankaaga. Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa inta badan magaalooyinka waaweyn.
Dukaan madaxbannaan ayaa dib u eegi kara giraantaada oo ku siin kara talada ugu fiican ee sida loo iibiyo. Si aad u noqoto dhinac ammaan ah, raadi dahablaha leh Machadka Gemological of America (GIA).
Waxay kaa caawin karaan garashada qiimaha giraantaada iyo inay dheemanka ka saari karaan. Ka qaadista dheemanka ayaa ah habka ugu fiican uguna saxsan ee lagu qiimeyn karo tayada dheemanka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto cidda aad u oggolaanayso inaad sidaas samayso maxaa yeelay waxaad halis u tahay inaad jarto cidiyaha birta ah.
Habka ugu fiican uguna dhaqsaha badan ee lagu gato giraantaada ayaa ah inaad ka iibsato dheemanka iibsadaha onlayn.
In kastoo, aad si fiican u kasban karto marka aad faraantigaaga ku iibiso guriga xaraashka, iibsadaha onlaynka ah ayaa kaa caawin doona iibinta giraantaada si dhakhso leh iyo macaash macquul ah.
Waxaad ka gaari kartaa tan aaladaha sida Craigslist iyo eBay. Goobahani waxay kuu noqon karaan faa'iido weyn, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato.
Sababtoo ah iibinta giraanta dheemankaaga iyada oo loo marayo iibsadayaasha internetka ayaa leh khatar, ma xakamayn kartid.
Waa inaad la macaamishaa iibsadayaasha raadinaya heshiis wanaagsan mararka qaarkoodna ma oga qiimaha dhabta ah ee faraantiga hawlgelinta dheemankaaga. Sidoo kale, iibsadayaasha onlaynka ah waxay noqon karaan gemologists hiwaayadda oo aan fahmin qiimaha saxda ah ee giraanta.
Tani waxay muujineysaa in iibinta giraanta dheemankaaga internetka ay aad u fiican tahay laakiin xoogaa cillado ah.
Hadda, waad ogtahay in sida ugu wanaagsan ee lagu iibin karo faraantigaaga dheemanka uu yahay khadka tooska ah, kaasoo ah meesha kuugu fiican?
Shabakadaha ugu Fiican ee lagu Iibiyo Faraantigaaga Dheemanka Online 2022
Si ka duwan eBay iyo Craigslist, waxaa jira bogag internet oo kor u qaadi doona dheemankaaga iibinta internetka.
Waa kuwan aaladaha ugu wanaagsan ee lagu iibin karo ka -qaybgalkaaga dheemanka ama faraantiga hibada leh ee khadka tooska ah:
Worthy.com waa meesha ugu fiican ee lagu gato giraanta dheemankaaga internetka. Waxaan u tixgeliyaa kuwa ugu fiican maxaa yeelay waxay ku iibiyaan alaabtooda oo dhan xaraash online ah.
Boggan, waxaad ku raaxeysan doontaa warbixinta shaybaarka GIA oo lacag la'aan ah xitaa haddii aad go'aansato inaadan wax ka iibin. Tani caadi ahaan waxay kugu kici doontaa boqolaal doollar haddii aad adigu kaligaa samayso.
Intaa waxaa dheer, goobtu waa lacag la'aan maadaama ay cayminayaan dhammaan alaabta. Iyo qiimeynta Better Business Bureau ee A+ waa inay gacan ka geysataa yareynta cabsida ku saabsan luminta faraantiga.
Talooyin lagu Iibiyo Faraantiga Dheemankaaga Worthy.com
Search for Mudan.com
Bixi faahfaahinta ku saabsan giraantaada. Tusaale ahaan, dejinta, qaabka dheemanta, miisaanka dheemanka, midabka, iyo hufnaanta haddii aad taqaan.
Qiyaas qiimaha suuqa.
Markabkaaga soo rar.
Istaahila ayaa kaa caawin doona inaad nadiifiso, qiimeyso, sawirto, oo aad u qorto sharraxaad xirfadeed giraantaada.
Waxay ku xaraashaan faraantiga qiimaha aad dejisay
Markaa hel lacagtaada
Ikhtiyaar kale oo weyn oo lagu iibiyo riiggaaga dheemanka ee internetka ayaa la marayaa Mondiamo.
Goobtani waxay si gaar ah u tahay iibinta dheemanka.
Tallaabada ugu horreysa ee lagu qoro madalkan waa in la abuuro koonto. Markaad sidaas samayso, Mondiomo ayaa ku weydiin doona macluumaad ku saabsan giraantaada.
Markaa way ku aqbalaan oo baaraan faraantigaaga.
Waxay haystaan ​​qanacsanaanta macmiilka oo ay ku jirto bixinta dhammaan kharashyada haddii aadan ku qanacsanayn dalabkii ugu dambeeyay, waxaadna dib u heli kartaa faraantiga lacag la'aan.
CashforGoldUSA iyo CashforDiamondsUSA waa laba farac oo isku shirkad ah oo ku takhasusay gadashada iyo iibinta dahabka iyo dheemanka, siday u kala horreeyaan.
Waxay sumcad aad u fiican ku leeyihiin dhinaca iibinta faraantiga dheemanka. Waxay sidoo kale u soo rartaan dahabka lacag la'aan, caymis alaabtaada oo wax lacag ah kama qaadaan soo celinta dalabka.
Ka -tegista faraantiga hawlgalka ama faraanti kasta oo dheeman ah oo hadiyad ahaan aad u leedahay waxay noqon kartaa dareen. Haddii ay tahay inaad iibiso, waa inaad ugu yaraan iibisaa si macaash fiican leh. Maqaalkani wuxuu ku tusi doonaa sida ugu wanaagsan ee loo iibin karo faraantigaaga dheemanka sannadka 2022.
Sida lacag looga sameeyo eBay adiga oo aan waxba iibin | 2022 La cusbooneysiiyay
10 Siyaabood oo Lacag looga Sameeyo Instagram -ka 2022 | Xeelado la Caddeeyay
23 Barnaamijyada Streaming ugu Fiican Xbox mid ka mid ah 2021 -ka
Adeegyada qulqulka ayaa la wareegaya warshadaha TV -ga iyo ciyaartoy weyn oo suuqa ka jira waa Xbox oo leh…
Sida Loo Helo Sicir -dhimista Ardayga Wilko Si dhakhso leh 2021 -ka
Dukaan tayo leh ahaan, Wilko waxa uu bixiyaa alaabo aan caadi ahayn oo qiimaheedu cadaalad yahay. Si kastaba ha ahaatee, maxaa cadaalad ah celcelis ahaan…
Jeebka ugu Yar ee ugu Fiican 2022 oo leh Qiimayaal
Adiga oo ah mudane in aad leedahay dhadhan fudud laakiin la safeeyey, helitaanka boorso ku habboon waxay noqon kartaa…
10 Meelo Aan La Ogayn Oo Laga Heli Karo Razor Raqiis Ah 2022 | La cusboonaysiiyay
Xiritaanku aad bay lagama maarmaan u tahay qof kasta oo soo maray qaangaadhnimada. In kasta oo ay qaali tahay, dhab ahaantii waxaa jira siyaabo aad…
Fiidiyowgu wuxuu noqday mid loo tolay dhinac kasta oo nolosheenna ah - waa qaabka aasaasiga ah ee muujinta, isgaarsiinta,…
Costco Vs Sams Club 2022: Faa'iidooyinka Xubinnimada ee ugu Fiican | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Costco vs Sam's Club ayaa isku dhacey yaa ah tafaariiqda ugu wanaagsan in muddo ah…